Nyaya - Goodao Technology Co, Ltd.
* HX Tarisiro
HX yaizogadzira yeupfu yeupfu simbi simbi mukati memakore matatu. HX yakatsunga kuita ne "akatendeka uye akavimbika, kuzvidzora uye kuzvipira munharaunda, uye hunyanzvi" kupa uye kupa yakanaka mhando uye sevhisi kune yakasarudzika mashandiro mashandiro, mhando yemhando yesimbi zvinhu.
* HX Nhoroondo
Kubvumbi 2012, HX yakavambwa.
Chikumi 2012, HX inotora mwedzi miviri kuti ibudise yakaderera gasi chromium upfu muhuwandu, iyo yakasviba nhanho inogona kudzora nhanho iri padyo nezvinhu zvakasvibirira kuzadzisa zvinodiwa nevatengi vari mune yepamusoro-kumagumo tarisiro uye plasma yekupuruzira indasitiri.
Gumiguru 2012, HX yakaunza iyo yepamusoro vharuvhu michina uye kumisikidza kwakabudirira, kuburitsa yakakwira tembiricha chiwanikwa, Getter uye multivariate akateedzana alloys.
Kukadzi 2013, technical innovation, Ti poda ne maching maitiro yakatsiva hydrogenation poda, inogona kuchengetedza kupfuura RMB 7K / ton uye
iyo mhando inogona kusvika kune yekuwedzera chiyero.
Chivabvu 2013, Iko kugona kwe titanium upfu yakasvika makumi mashanu ematani pamwedzi uye chikamu chayo chemusika chiri kuwedzera zvishoma nezvishoma.
Gumiguru 2013, Nitriding vira uye sintering vira vakaiswa zvakabudirira, iwo musika wemari chiyero che nitride uye carbide akateedzana zvigadzirwa zvakatora mumusha musika nekukurumidza, simbisa HX brand mumusika musika.
Kurume 2014, Yakaunza iyo vaccum michina uye tekinoroji kugadzira kuburitsa zirconium poda pakukumbira kwebasa remauto,
kuburitsa zirconium upfu hwemauto anopisa mumiririri uye zvakajairika chigadzirwa poda.
Gumiguru 2014, Boride akateedzana uye silicide akateedzana macomputer zvigadzirwa akabudirira R & D uye akagadzirwa akazvimirira.
Chivabvu 2015, Mini-mapiritsi eTi naCr akagadzirwa zvizere.
Gumiguru 2015, Wepamusoro manejimendi akatsunga kusimbisa uye kuunza yepamusoro-kumagumo tekinoroji matarenda kutungamira HXs kushanda kuvandudza.
Zvita 2015, Titanium yekuwedzera titanium poda yekugadzira tekinoroji ichiwedzera kuvandudzwa, mhando yemhando yakasvika padanho repasi rose.
Simba racho rakasvika pakakwirira.
Chikumi 2016, Isu tinotarisana nekutsvaga musika wekunze kwemakungwa, Chiverengero chezvigadzirwa vatengi vanotanga kuyedza.HX yave ichizivikanwa kune vatengi vekunze.